Distrowatch: zvese zvaunoda kuti uzive nezve ino chikuva | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe wanga uri munyika yemahara software kwenguva yakareba, kunyanya mune iyo yekuparadzirwa kweGNU / Linux (kunyangwe ichipfuura izvo), ingangove isiri nguva yekutanga kuti unonzwa nezve Distrowatch. Kune rimwe divi, kana iwe uchangosvika kana uri kuronga kuisa distro, zvirokwazvo izita rekufunga nezvaro, nekuti rinogona kukubatsira zvakanyanya mukusarudza uye kuziva ino nyika zvirinani.
Distrowatch iri peji rewebhu, sevamwe vakawanda. Asi kubvira payakatanga zvave zvakadaro yakatarisa pane chairo basa. Ndokusaka yakave ine mukurumbira. Kana iwe uchida kuziva zvese zvakadzama zveichi chirongwa uye iwe usingachizive, ndinokukoka iwe kuti uenderere mberi kuverenga kuti uwane zvese zvakavanzika ... uye kunyangwe dai waitozviziva, unogona kushamisika kuziva zvimwe zvimwe izvo zvimwe wanga usingazivi.
1 Chii chinonzi Distrowatch?
2 Ungabvunza sei?
Chii chinonzi Distrowatch?
Distrowatch Ndicho website yakatsaurirwa kune akati wandei zvinhu zvakakosha:
Noticias nezve yemahara uye yakavhurwa sosi software. Unogona kuishandisa sosi sosi kuti urambe uchiziva zvenguva zvakare.
Links pamwe nekuongorora, screenshots uye ruzivo rwekuvandudza, kuburitsa kana zviitiko zvitsva.
Asi kana paine chimiro icho ino webhusaiti inozivikanwa chaizvo, imhaka yeruzivo pane anoshanda masisitimu kana distros irimo. Zvipo mukurumbira kuera de iyo inoshandiswa zvakanyanya distros, ne manhamba akaiswa nezve izvi SSOO kuti ugone kuzviongorora.
Uye hongu, ini ndanyora masystem anoshanda nekuti haingotarise pane kugoverwa GNU / LinuxIwe zvakare uchawana ruzivo nezve mamwe anoshanda masystem senge BSD, Solaris uye zvigadzirwa, uye kunyangwe mamwe emahara kana akavhurwa sosi masystem ayo asina kunyatso kuzivikanwa.
Chinangwa cheichi chirongwa chikuru ndechekuita kugamuchirwa kweiyo software uye masisitimu, kutanga kuchizivisa. Uye chechipiri, vashandisi vanofarira vanogona ita enzaniso dzekugovera uye masisitimu anoshanda, kugona kuongorora hunhu hunovasiyanisa kubva kune vamwe uye nekudaro kukwanisa kusarudza hwakanakisisa mune imwe neimwe nyaya.
Uye zvakare, kufarirwa kweDistrowatch kwakakonzera kuti vanhu vazhinji vashande pamwe nayo, kuchengetedza saiti pane akasiyana mitauro pakati padzo pane Chirungu, ChiFrench, ChiSpanish, ChiGerman, Danish, ChiNorway, ChiPolish, Chinyakare Chinese, chiJapanese, nezvimwe.
Distrowatch yakabuda muna Chivabvu 31, 2001, gore uko kutorwa kweGNU / Linux uye mamwe masisitimu haina kuita sezvazviri nhasi, asi ini ndanga ndichitoona kuti vashandisi vakawanda vasarudza kuishandisa sei. Ramba uchifunga kuti yakanga isina kureba kwazvo kubvira pakagadzirwa Linux (1991), kunyangwe yemamwe masisitimu aunowana, yaive yakati rebei kubvira kutanga kwayo.
Yakaitirwa kuve imwe chete saiti kwaunogona kuwana ruzivo rwakawanda, uye yakabudirira. Kubva panguva iyoyo yakachengetedzwa naLadislay Bodnar. Asi kubva ipapo zvakawanda zvachinja. Pakutanga, yaingova netafura yakapusa inoratidzira mashanu makuru Linux distros enguva, tichienzanisa mutengo, shanduro, zuva rekuziva, nezvimwe. Uye zvishoma nezvishoma zvaiwedzera zvimwe zvirimo nemabasa.
Nekufamba kwenguva yakakura zvakare kupfuura iyo GNU / Linux distros, ine * BSD uye Solaris masisitimu, pamwe nezvimwe zvigadzirwa zveizvi. Izvo zvakavashandura kuva inonyanya kukosha dhatabhesi iyo inogona kuwanikwa nenharaunda kudzidza nezve mahara software uye yakavhurwa sosi mapurojekiti.
Ladislay Bodnar iye akataura kuti basa re nhamba yewebhu webhusaiti yaive pamberi uye shure kweprojekiti. Bodnar yaida kugadzira yakanaka yakatendeka hwaro pane iripo distros kuitira kuti vashandisi vagone kureva nezvayo uye kuvabatsira kusarudza. Pamusoro pekusanganisa zvinongedzo zvekuenda kune yega yega peji reruzhinji reimwe distro kurodha pasi.
Akawanda manhamba ake akave akakurumbira zvekuti mamwe mawebhusaiti uye vaongorori vanoashandisa seye regedzi gwara pane kufarirwa kwekuparadzirwa. Izvo zvinoenderana nenhamba yekushanya kwekupinda kwega kwega paInternet. Nenzira iyoyo iwe unoziva chiri kuve chinoitika gore rega.
Iyi yaunoona pamitsetse iyi ndeye iyo Distrowatch webhu inowanikwa. Sezvauri kuona, iri webhusaiti yakatarisika yechinyakare asi iri nyore kushandisa. Sezvauri kuona, iwe une zvese zvaunoda pamunwe wako, semuenzaniso:
Peji yekumba: ine nzvimbo dzinoverengeka dzinozivikanwa.
Munzvimbo yepakati iwe une nhau dzichangoburwa nezve mahara software uye yakavhurwa sosi. Unogona kusefa nezuva kana distro, kana iwe uchida kutsvaga chimwe chinhu chakanyanya kutaurwa.
Kuruboshwe iwe unogona kuwana ikholamu ine runyorwa rwezvazvino kugovera izvo zvakagadziridzwa uye zvakare azvino mapakeji.
Kurudyi iwe unogona kuona iyo nhamba yenharaunda nezve distros Ivo vanorairwa nenhamba yekudzvanya, kubva kune anozivikanwa kusvika kudiki inozivikanwa. Iyo ine firita yekugona kuongorora mukurumbira wayo mumatanho enguva akasiyana. Unogona kunyange kwemakore apfuura ...
Nzvimbo yepamusoro yemenyuHeano mamwe eamatanho akareruka anokuendesa kune dzimwe nzvimbo dzewebsite yeDistrowatch. Pakati pavo unogona kuratidza:
Torrent zone: kurodha pasi dzakasiyana mashandiro ekushandisa uchishandisa iyi protocol kubva kumutengi senge Kufambisa. Iyo inogona kuve nzira yakanaka yekurodha pasi masisitimu ako uchishandisa inokurumidza uye yakachengeteka maitiro, seimwe nzira kune yepamutemo mawebhusaiti.
Kubwinya: iro rinoshanda chaizvo diki diki nemamwe mazwi iwe aunowana mune ino webhusaiti uye izvo zvinokubatsira iwe kuti unzwisise zvirinani zvavanoreva.
Zvinouya zvinoburitswa: ichakuratidza izvo zvichazoburitswa zvinotevera, seyotarisa peji rayo guru renhau kuti uzive zvichauya ...
Wedzera kugovera kutsva: iwe unogona kuisa iyo data kuti uwedzere kugovera kutsva kusingazivikanwe parizvino kana kuti iwe wakazvigadzira pachako. Nenzira iyoyo ichaonekwa pawebhu pakati pevamwe.
Vamwe: iwe unowana zvakare zvimwe zvikamu zvine ruzivo nezve iyo Distrowatch pachayo, nezve iyo mepu saiti kuti uwane zvirinani zvauri kutsvaga, nezve kushambadzira kwavanoshandisa kutsigira chirongwa ichi, nezvimwe.
Munhoroondo yayo yese yakaburitsa iyo manhamba eakanyanya kufarirwa ma distros kana kushanyirwa. Iwe unogona kuverenga nhoroondo yeavo vanga vachigara munzvimbo dzepamusoro pamusoro pemakore kubva pano.
Ndinovimba yakakubatsira iwe kuwana zvimwe zvisingazivikanwe nezve uyu mutana waunoziva!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Distrowatch: zvese zvaunoda kuti uzive nezve ino papuratifomu
Huwandu hwema distros kunze uko hwanyanya.
Kana pachinzvimbo chekuparadzira zvakanyanya ivo vakabatana nemauto mune ayo anoshanda zvese uye mushe,
nyika pakupedzisira yaigona kuzvisunungura kubva paudzvanyiriri hweWindows.